Xuska dhalashada Nabigeenna (NNKH) oo maanta ka soconaya Gobollada dalka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Xuska dhalashada Nabigeenna (NNKH) oo maanta ka soconaya Gobollada dalka
Xuska dhalashada Nabigeenna (NNKH) oo maanta ka soconaya Gobollada dalka
Muqdisho(SONNA) Xaflado lagu weyneynayo dhalashadii Nabigeenna Muxamed SCW ayaa maanta ka soconaya gobollo ka tirsan dalkeena Soomaaliya iyo guud ahaan wadamada muslimiinta ah.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa fasaxday dhamaan shaqaalaha rayidka ah xuska dhalashada Nabigeenna awgeed, taasoo ku beegan 12-ka Bisha Rabiicul Awal ee taariikhda Hijriyada.
Sanad kasta marka la gaaro maanta oo kale waxaa ummadaha muslimiinta ah u dabaaldegaan dhalashadii nabigeenna oo ku asteysan 12-ka Bisha Rabiicul Awal, iyadoo laga sheekeeyo siirada nabigeenna Muxamed.
Sheekh Maxamuud Aw-Cabdulle Cariif oo ka mid ah culimada sida weyn looga ixtiraamo Guud ahaan Soomaaliya ayaa Wareysi uu siiyay Radio Muqdisho kaga hadlay muhiimaddu ay bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacuubta Muslimiinta u leedahay xusidda iyo weyneynta dhalashada Nabigeenna Suuban (NNKH).
Previous articleCiidamada Xoogga Dalka oo Baladul-Amiin ku qabtay hub iyo waxyaabo Qarxa.+Sawiro
Next articleQarax sabaabay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Boosaaso
[DHAGEYSO+SAWIRRO]Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhanka Galmudug oo qeylo dhaan ka muujiyey Abaaraha ka jira deeganada Gobolkaas
[DHAGEYSO+SAWIRRO]Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee dhanka Galmudug oo qeylo dhaan ka muujiyey...